Iyo iPhone 7 inogona kushandisa LG lenzi (kwete Sony) | IPhone nhau
IPhone 7 inogona kushandisa LG lenses (kwete Sony)
Muongorori ane mukurumbira muApple nyika ndiMing-Chi Kuo. Kunyangwe dzimwe nguva zvichitaridzika kwatiri kuti vaongorori ava vanotaura zvinouya mupfungwa (uye vachiibhadharisa), aya mazvikokota ane ruzivo rwakanyanya nekuti vane vamwe vaunotaura navo. Kuo ndiye akatanga kutaura kuti iyo iPhone 7 Aizove nekaviri kamera uye akagona kuziva kare nekuti aiziva nezve hurongwa hwaApple hwekurega kushandisa malensi eSony uye otanga kushandisa LG magirazi in 2016.
Chii chingave chikonzero chekurambana uku chatipa makore mazhinji emufaro? Zvakanaka, iyo mbiri kamera yeiyo iPhone 7 Plus. Sony yaisazokwanisa kusvika nenguva kugadzira malenzi maviri ayo Apple anotarisira kuisa mune yayo inotevera iPhone Plus, saka mutsva webato muenzi wasvika: LG Innotek. Zvirinani ndizvo zvinovimbiswa nerunyerekupe rwazvino, zvakare nhonga ari wepakati Barron, uyo anotora vanyori kubva kuNomura Securities.
Iyo iPhone 7 ine LG lenzi?
Mukuru we Sony, Kenichiro Yoshida akataura muchitauro chemari gore rapfuura kuti tekinoroji yayo yemamera maviri-lens ichave yakagadzirira makambani makuru gore rinouya, asi haina kutumidza zita rekuti Apple. Kune rimwe divi, muongorori weNomura Securities Chris Chang haatendiwo kuti Sony yaigona kuzadzisa chinodikanwa cheApple chemhando idzi dzemakamera uye Chikonzero chakapihwa ndechekuti Kunamoto kudengenyeka kwenyika Izvo zvakakanganisa mafekitori kwavanofanirwa kugadzira aya lenzi.
Ini pachangu, ini ndagara ndichifunga kuti Sony lenzi ari, pamwe chete naCarl Zeiss, akanakisa lenzi dzemakamera. Ini handidi ivo kuti vachinjire kushandisa LG lenzi, asi kuti tikwanise kupindura, isu tinofanirwa kumirira kuti tione mhedzisiro. Kune rimwe divi, Chang anoti gore rino vachave chiratidzo chemufananidzo chinodzikamisa (OIS) ese ari 7-inch iPhone 4.7 uye iyo 5.5-inch modhi. Tichaona kana Nomura Securities ikawana mamiriro ayo zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » IPhone 7 inogona kushandisa LG lenses (kwete Sony)
Apple inobvisa iOS 9.3.2 nekuda kwedambudziko reiyo iPad Pro 9.7 "